မြင်းစီးခြင်းက ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာစေကြောင်း မျှဝေလာတဲ့ တိုင်ရွန် - Cele Gabar
မြင်းစီးခြင်းက ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာစေကြောင်း မျှဝေလာတဲ့ တိုင်ရွန်
ယောကျ်ားပီသပြီး တောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အမိုက်စားတက်တူးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တိုင်ရွန်ကတော့ အချိန်တိုအတွင်း ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အဝရလာတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပါ။ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေဆက်တိုက်လုပ်နေရသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိလာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းက အင်းလေးကိုရောက်ရှိနေပြီး သူ့ရဲ့အနုပညာကိုပံ့ပိုးမယ့် နောက်ထပ်အတတ်ပညာတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်းစီးလေ့ကျင့်နေသူပါ။ အင်းလေးရောက်တုန်း မြင်းစီးခြင်းကို သေချာလေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်ရွန်ကတော့ မြင်းစီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” မြင်းစီးခြင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေပါတယ် စစီးတုန်းကလန့်ပေမယ့် သင်ယူရင်း တဖြည်းဖြည်း မြင်းလေးတွေရဲ့ သဘာဝကို ပိုမိုနားလည်သိရှိလာတယ်…. ပိုပြီးလည်းစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ် လန့်စရာမလိုပါဘူး…. အခွင့်ကြုံရင် စီးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အကြောက်အလန့်ကြီးကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများအတွက် မြင်းစီးခြင်း လှေလှော်ခြင်း တောင်တက်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကို အပျင်းပြေလောက် ကြိုးစားကြည့်ဖို့တောင် ခဲယဉ်းတာအမှန်ပါ။ တိုင်ရွန်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပထမက လန့်ခဲ့ပေမယ့် မြင်းစီးခြင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေမယ့်အရာလေးမို့ မလန့်နေကြဘဲ အခွင့်ကြုံရင် ကြိုးစားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Tyron, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, တိုင်ရွန်, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post ပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်ကုန်တွေကို အားပေးကြဖို့ပြောလာတဲ့ အဆိုတော်မိစန္ဒီ
Next post ဆူဇီရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပွင့်နဒီမောင်